Shenzhen KingTop Technology Co., Ltd.waxaa la aasaasay 2004, oo ku yaal Shenzhen taas oo leh faa'iidooyin gaar ah silsiladda warshadaha oo dhameystiran iyo gaadiid ku habboon. KingTop waa mid ka mid ah warshadaha xirfadeed ee PCB & PCBA ee Shiinaha. Waxaad siisaa macaamiisha adeegyo naqshadeeye wareega ah ah iyo barnaamijka horumarinta ah. Oo ay leeyihiin kooxaha R&D, khadadka isku imaatinka si ay u horumariyaan una soo saaraan waxyaabo kala duwan oo elektaroonig ah oo loo dhoofiyo.
KingTop waxay leedahay aqoon isweydaarsi aan lahayn boodh 3500 mitir murabac ah, in ka badan 120 shaqaale ah, 10 farsamo yaqaanno, 8 injineerro ah. Qalabka qalabka ee horumarsan, sida YAMAHA YS24, YSM10, YS12, YG200, YV100XGP, 4sets AOI (khadka internetka), X-RAY Welding Spot Inspection Machine (BGA, PoP, CSP, QFN, Flip Chip, COB), 3D SPI (Automatic Nidaamka baarista xawaaraha 3D ee iibiyaha xawaaraha sare ah, Mashiinka Reflow Oven iyo Wave Soldering Machine (in kabadan 6sets oo khadadka tooska ah ee otTT), iyo Khadadka wax soo saarka ee THT. Hawlgalka warshaddu waa mid waafaqsan nidaamka ISO9001.
PoP Kaydinta ah (Xidhmada Xidhmada ah) IC stackup shuruudaha saxda si sax ah sare u qaadis ah. Waxaan soo qaadan karnaa 0201 / 01005chip iyo QFP / BGA / QFN garoonka 0.2mm. Gudbi HDI guddiga ugu yar iyada oo loo marayo cabirka 0.1mm, raad raac ugu yar 0.075mm, meel ugu yar 0.075mm, Indho-kursi lagu aasay. Mashiinada iibinta ee dib loo cusbooneysiiyay ee leh 10 aag heerkul ah si loo wanaajiyo saxnaanta alxanka iyo tayada.
Alaabada ugu waaweyn:
Dhammaan noocyada kala duwan ee PCB, PCBA ee kumbuyuutarrada kumbuyuutarka, kumbuyuutarka kumbuyuutarka, Miiska PC, Solar Energy, AI, UAV, Robotic, Display, elektaroonig elektarooniga ah, Qalabka muusikada xirfadeed, POS, Amniga, elektaroniga casriga ah, Smart Home, Xeedho EV, GPS, IoT, xakameynta heerkulka qalabaynta warshadaha, iwm.